Ezempilo: imiphumela yengqondo ye-porn | | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Impilo Imiphumela Yengqondo Ye-Porn
Ubhadane lweCovid-19 lusho ukuthi abantu emhlabeni jikelele bahlushwa ukucindezeleka okukhulu ngenxa yoshintsho kanye nokungaqiniseki okwenziwa yigciwane empilweni yethu yansuku zonke. Abaningi baphendukela ezithombeni ezingcolile ukuze bazinciphise ukukhathazeka noma ukudangala, noma ukuthola injabulo esheshayo. Imboni yezocansi yezigidi zamadola isebenzisa ngokunenzuzo abantu abaningi abazizwa benesithukuthezi ngenkathi bebhajwe ekhaya futhi banikeza ukufinyelela kwamahhala kumasayithi we-premium ukukhuthaza ukusetshenziswa. Inselelo ekhona ukuthi ukulungiswa okusheshayo kuvame ukuba nezingozi ezifihliwe, njengokuncika kancane kancane okungaholela ekusetshenzisweni okunenkinga ngisho nokulutha kwabanye. Amakhasi alandelayo azokusiza ukukwazisa kakhulu ubungozi nokuthi yini ongayenza ukuze usebenzise izindlela ezingcono zokubhekana nalesi sikhathi. Into yokugcina oyidingayo ingcindezi nokungaphatheki kahle obekungakugwema ngemininingwane ethile ewusizo ekuqaleni.
Nazi izingcaphuno ezimbili eziwusizo okufanele uzicabangele lapho ucabanga ngomthelela we-porn empilweni yengqondo:
"Kuyo yonke imisebenzi eku-inthanethi, i-porn inamandla amakhulu okuba umlutha," kusho ososayensi bezinzwa baseDashi UMerkerk et al. 2006
“Impilo yakho iyashintsha uma unolwazi olusebenzayo lobuchopho bakho. Kudinga ukuzizwa unecala uma ubona ukuthi kunesisekelo semvelo sezinto ezithile ezingokomzwelo, ”kusho udokotela wezifo zengqondo uDkt John Ratey, (P6 Isingeniso sencwadi ethi“ Spark! ”).
Ngaphambi kokungena emininingwaneni eminingi mayelana nemiphumela yengqondo yokusetshenziswa kocansi ngokuhamba kwesikhathi, ake sikhumbule ukuthi kungani kubalulekile ukuyinselela. I-porn ye-Intanethi ivimbela isifiso nokwaneliseka ngempilo yangempela, ubudlelwane bezocansi. Lokho kuyinhlekelele njengoba uthando lwezocansi nokusondelana kungezinye zezimo ezinhle kakhulu esingaba nazo njengabantu.
Ukufunda ngemiphumela ye-Porn
Lokhu kufunda ngemiphumela ye-porn ebuchosheni bekuyinto eyodwa ebaluleke kakhulu esiza abantu ukuthi banqobe imiphumela emibi eminingi engokwengqondo nengokomzimba ngenxa yokusebenzisa kabi i-porn. Kuze kube manje, kukhona ngaphezulu Ucwaningo lwe-85 lokho kuxhumanisa impilo engeyinhle ngokwengqondo nangokomzwelo nokusetshenziswa kocansi. Le miphumela isukela kwinkungu yobuchopho nokukhathazeka komphakathi kuye kuye ukucindezeleka, isithombe somzimba esingesihle kanye nama-flashbacks. Ukuphazamiseka kwemikhuba yokudla, kuyanda kubantu abasha, kubangela ukufa okuningi kunanoma yisiphi esinye isifo sengqondo. I-Porn inomthelela omkhulu emibonweni ehlelekile yesithombe somzimba.
Ngisho namahora amathathu okusetshenziswa kwe-porn ngesonto kungadala ukuthi kubonakale ukuncishiswa kwezimpunga ezindaweni ezibalulekile zobuchopho. Lapho ukuxhumana kobuchopho kubandakanyeka, kusho ukuthi kuthinta indlela oziphatha ngayo nomoya. Ukuzitika njalo nge-porn ye-hardcore ye-inthanethi kungadala abanye abasebenzisi ukuthi babe nezinkinga zempilo yengqondo, ukusetshenziswa okuyimpoqo, nokulutha. Lokhu kuphazamisa kakhulu impilo yansuku zonke nezinhloso zempilo. Abasebenzisi bavame ukukhuluma ngokuzizwa 'bekindiki' maqondana nezinjabulo zansuku zonke.
Bona le vidiyo yemizuzu emi-5 lapho a I-neurosurgeon ichaza izinguquko zobuchopho. Nayi isixhumanisi ocwaningweni oluyinhloko nasezifundweni eziphathelene nempilo engokwengqondo nengokomzwelo empofu, kanye nemiphumela yokuqonda (ukucabanga) empofu. Le miphumela ithinta ikhono lomsebenzisi lokuzuza kahle esikoleni, ekolishi noma emsebenzini. Bona i-MAHHALA yethu izinhlelo zokufunda ezikoleni ezizosiza abafundi ukuthi bazi ngemiphumela yezempilo yezengqondo yezenhlalakahle nempilo yabo kanye nokukwazi ukukufeza esikoleni.
Yize ukuzitika nge-porn ngokuhamba kwesikhathi, kukodwa, kungaholela ezinkingeni zempilo yengqondo, abanye abantu bake bahlukumezeka ezimpilweni zabo futhi basebenzise i-porn ukuzithambisa. Kulezi zimo, abantu badinga usizo ukuze baphinde baxhumane nemizimba yabo ukubasiza ukuphatha izehlakalo ezibuhlungu ezibagcina bevaleleke ezindleleni zokubhekana nezindlela ezingafanele. Singayincoma le ncwadi ngudokotela wezifo zengqondo nocwaningo uSolwazi Bessel van der Kolk, “Umzimba Ugcina Amaphuzu”Ezinze e-USA. Kunamavidiyo amahle naye ku-YouTube akhuluma ngezinhlobo ezahlukene zokuhlukumezeka kanye nokuhlukahluka (i-limbic brain) ukwelapha eziphumelelayo. Kulena uncoma amandla we yoga njengenye yokwelashwa okunjalo. Kulesi esifushane akhuluma ngaso isizungu futhi post post traumatic stress disorder. Lapha ukhuluma ngakho ukuhlukumezeka nokunamathiselwe. Lokhu kuhlobene nokuhlukumezeka abantu abaningi abakuzwayo njengomphumela we ubhubhane, I-COVID-19. Kugcwele izeluleko ezihlakaniphile.
Uhlu olungezansi lubeka imiphumela esemqoka ebonwa ngabachwepheshe bezokunakekelwa kwempilo nangokubuyisa abasebenzisi kumawebhusayithi alulame njengawo I-NoFap futhi Ukuvuselela kabusha. Izimpawu eziningi azibonwa kuze kube yilapho umsebenzisi eyeka amasonto ambalwa.
Sibutsetelo Izingozi ze-Porn
Umkhuba wokubuka ezocansi onamandla ubangela lezi zinkinga ezilandelayo:
ukuhoxa emisebenzini yomphakathi
ukuthuthukisa impilo eyimfihlo
ukuqamba amanga nokukhohlisa abanye
ukukhetha i-porn ngaphezu kwabantu
uzizwe engaphathekile kahle
uzizwe ethukuthele futhi ecindezelekile
ubhekana nokushintshana kwemizwelo
ukukhathazeka okugcwele nokwesaba
ngizizwa ngingenamandla maqondana ne-porn
Ngocansi abanye abantu
ukuphatha abantu njengezinto zocansi
ukwahlulela abantu ikakhulu ngokuya kwezitho zabo zomzimba
Ukungahloniphi izidingo zabanye abantu zangasese nokuphepha
ukunganaki ngokuziphatha okulimazayo ngokocansi
Ukuzibandakanya ekuziphatheni okuyingozi nokuyingozi
ukufinyelela i-porn emsebenzini noma esikoleni
ukufinyelela izithombe zokuhlukunyezwa kwezingane
ukubamba iqhaza ezenzweni zokuhlukumeza, zokuhlukumeza, zobudlova, noma zobugebengu
ukukhiqiza, ukusabalalisa noma ukuthengisa ezocansi
ukuzibandakanya ocansini olungaphephile nolimazayo
Umlingani osondelene naye ongathandeki
ubudlelwane bulinyazwa ukungathembeki nenkohliso mayelana nokusebenzisa izithombe zocansi
umlingani ubheka i-porn njengokungathembeki ie "ukukopela"
umlingani wami uya ngokuya ecasukile futhi ethukuthele
ubudlelwane buyehla ngenxa yokungethembani nenhlonipho
umlingani ukhathazekile ngenhlala-kahle yezingane
umlingani uzizwa enganele ocansini futhi esongelwa yi-porn
ukulahleka kokusondelana ngokomzwelo kanye nokuzijabulisa ngocansi
ukulahleka kwesifiso sobulili nomlingani wangempela
ubunzima ukuvuswa kanye / noma ukufezekisa i-orgasm ngaphandle kocansi
imicabango ethintekayo, imicabango, nezithombe ze-porn ngesikhathi sex
ukufunwa ngocansi noma inkani kwezocansi
ukuba nobunzima bokuxhuma uthando nokunakekela ngocansi
ukuzwa ngocansi kungalawulwa futhi kuyaphoqelelwa
ukukhulisa intshisakalo ebungozini obuyingozi, obonakalisayo, nokuhlukumeza, kanye / noma ubulili obungekho emthethweni
ukungoneliseki okukhulayo ngocansi
ukungasebenzi ngocansi - ukungakwazi ukwenza i-orgasm, ukumiswa komzimba, ukungasebenzi kahle kwe-erectile
umuzwa onqanyuliwe kusuka kumanani abantu, izinkolelo nezinjongo
ukulahleka kobuqotho bomuntu
imizwa ephikelelayo yokuba necala nehlazo
umuzwa olawulwa yi-porn
Ukunganaki izindawo ezibalulekile empilweni
impilo yomuntu siqu (ukungalali kahle, ukukhathala, nokuzikhathalela)
impilo yomndeni (ukunganaki umlingani, izingane, izilwane ezifuywayo nemithwalo yemfanelo yasekhaya)
ukuphishekela umsebenzi nomsebenzi wesikole (ukugxila okuncishisiwe, ukukhiqiza, kanye nentuthuko)
ezezimali (ukusetshenziswa kwemali kwizisetshenziswa zocansi)
Ingokomoya (ukuhlukaniswa nokholo nokuzilolonga ngokomoya)
ngokufisa i-porn kakhulu futhi ngokuqhubekayo
ubunzima ukulawula imicabango, noma ukuvezwa, nokusetshenziswa kwe-porn
ukungakwazi ukuyeka ukusetshenziswa kwe-porn naphezu kwemiphumela emibi
ukwehluleka okuphindaphindiwe ukuyeka ukusebenzisa i-porn
idinga okuqukethwe okweqisayo noma ukudalulwa okukhulu kwe-porn ukuthola umphumela ofanayo (izimpawu zokuhlala)
ubhekana nokungakhululeki kanye nokuxakeka lapho uncishwa i-porn (izimpawu zokuhoxisa)
Uhlu olungenhla luhunyushwe encwadini "I-Trap Porn”NguWendy Malz. Bona ngezansi ukuze usekele ucwaningo.
"Ukushisa Kwesikhashana" nobugebengu bezocansi
Kulolu cwaningo olumnandi “Ukushisa Kwesikhashana: Umphumela Wokuvuswa Kocansi Ekwenzeni Izinqumo", Imiphumela ikhombisa ukuthi" ukuheha kwemisebenzi kusikisela izenzo zokuvusa ucansi njengezikhulisa izinhlobo ezithile "ezinsizweni…
“Umqondo wesibili wemiphumela yethu ngukuthi abantu babonakala benolwazi oluncane kuphela ngomthelela wokuvusa inkanuko ekwahluleleni nasekuziphatheni kwabo. Ukwazisa okunjalo kungabalulekile ekuthathweni kwezinqumo komuntu ngamunye kanye nomphakathi.
“… Izindlela eziphumelela kakhulu zokuzithiba mhlawumbe akukhona ukuzimisela (okukhonjiswe njengokusebenza okulinganiselwe), kepha kunalokho ukugwema izimo lapho umuntu ezovuka khona futhi angakwazi ukuzilawula. Noma ikuphi ukwehluleka ukwazisa umthelela wokuvuswa kocansi ekuziphatheni komuntu kungenzeka kuholele ezinyathelweni ezinganele zokugwema izimo ezinjalo. Ngokufanayo, uma abantu bengahloniphi amathuba abo okuya ocansini, maningi amathuba okuthi bahluleke ukuthatha izinyathelo zokunciphisa umonakalo ongaba khona kulokho kuhlangana. Umuntu osemusha owamukela '' vele uthi cha, '' ngokwesibonelo, angazizwa kungadingekile ukuletha ikhondomu ngosuku, ngaleyo ndlela kwandise kakhulu amathuba okukhulelwa noma ukudluliswa kwama-STD uma egcina ebanjwe ukushisa okwamanje. ”
“Lo mqondo ofanayo usebenza ngokubambisana. Uma abantu behlulela abanye ngokuziphatha okungenzeka kusekelwe ekubabukeni lapho bengavuswanga ngokocansi, futhi behluleka ukwazisa umthelela wokuvuswa kocansi, lapho-ke kungenzeka babambe ongezansi ngokuziphatha komunye lapho bevuswa. Iphethini elinjalo lingaba nomthelela kalula ekudlwengulweni kosuku. Ngempela, kungadala isimo esonakele lapho abantu abangakhangwa kangako ezinsukwini zabo kungenzeka ukuthi badlwengulwe ngezinsuku ngoba bengavuswanga ngokwabo bayehluleka ngokuphelele ukuqonda noma ukubikezela indlela omunye umuntu aziphathe ngayo. ”
“Kafushane nje, ucwaningo lwamanje lukhombisa ukuthi ukuvuswa kocansi kuthonya abantu ngezindlela ezijulile. Lokhu akumele kusimangaze kubantu abaningi abanokuhlangenwe nakho komuntu siqu ngokuvusa ucansi, kepha ubukhulu bemiphumela buyabukeka. Ezingeni elingokoqobo, imiphumela yethu iphakamisa ukuthi imizamo yokukhuthaza ucansi oluphephile nolunesimilo kufanele igxile ekulungiseleleni abantu ukubhekana '' nokushisa kwesikhashana '' noma ukukugwema lapho kungenzeka kuholele ekuziphatheni okuzilimazayo. Imizamo yokuzithiba ebandakanya okuluhlaza amandla (I-Baumeister & Vohs, 2003) kungenzeka ingasebenzi lapho kubhekene nezinguquko ezinkulu zokuqonda nezishukumisayo ezibangelwa ukuvusa inkanuko. ”
Bona inkulumo ye-TEDx kaDan Ariely ku self Control.
Umlutha - imiphumela ekulaleni, emsebenzini, ebudlelwaneni
Umphumela oyisisekelo kakhulu wokubuka i-inthanethi eningi kakhulu ye-porn noma udlala nokuthi uthinta kanjani ukulala. Abantu bagcina 'bezintambo futhi bekhathele' futhi bengakwazi ukugxila emsebenzini ngakusasa. Ukuziluma njalo nokufuna leyo mphumela we-dopamine hit, kungaholela enkambisweni ejulile okunzima ukuyikhahlela. Kungadala futhi ukufunda 'kwe-pathological' ngesimo se Ukuba umlutha wezithombe. Yilapho-ke lapho umsebenzisi eqhubeka nokufuna into noma umsebenzi ngaphandle kwemiphumela emibi - njengezinkinga emsebenzini, ekhaya, ebudlelwaneni njll. Umsebenzisi ophoqelelwa uhlangabezana nemizwa emibi njengokucindezeleka noma ukuzizwa elele lapho ephuthelwa ukushaya noma injabulo. Lokhu kubabuyisela emuva kaninginingi ukuzama ukubuyisela imizwa yokuvuka. Umlutha ungaqala lapho uzama ukubhekana nakho ingcindezi, kepha futhi kubangela ukuthi umsebenzisi azizwe ecindezelekile. Kungumjikelezo omubi.
Lapho i-biology yethu yangaphakathi ingasasebenzi, ubuchopho bethu obunengqondo buzama ukuhumusha lokho okwenzekayo kusekelwe kulwazi lwangaphambilini. I-dopamine ephansi kanye nokudangala kwamanye ama-neurochemicals ahlobene kungaveza imizwa engathandeki. Kubandakanya isithukuthezi, indlala, ukukhathazeka, ukukhathala, amandla amancane, intukuthelo, ukufisa, ukudana, isizungu nokukhathazeka. Ukuthi 'sihumusha' kanjani imizwa yethu kanye nembangela yokucindezeleka, kuthinta indlela esiziphatha ngayo. Kuze kube yilapho abantu beyekela i-porn Ngabe bayabona ukuthi umkhuba wabo kube yimbangela yobudedengu obuningi ezimpilweni zabo.
Sivame ukuzama ukuzindla imizwa engemihle ngokuthile noma izinto esizithandayo kakhulu. Lokhu sikwenza ngaphandle kokuqaphela ukuthi mhlawumbe kwakuwukuphuza ngokweqile kuleyo ndlela yokuziphatha noma into eyayibangela imizwa ephansi kwasekuqaleni. Umphumela we-hangover uyimpindelo ye-neurochemical. EScotland, abaphuza utshwala abahlushwa i-hangover ngakusasa bavame ukusebenzisa isisho esidumile. Bakhuluma ngokuthatha “izinwele zenja ezikuluma”. Lokho kusho ukuthi banesinye isiphuzo. Ngeshwa kwabanye abantu, lokhu kungaholela emjikelezweni omubi wokuluma, ukudangala, ukuluma, ukudangala nokunye.
I-porn eningi kakhulu…
Umphumela wokubuka kakhulu, i-porn evuselela kakhulu ungaholela ekubonakaleni futhi ube nezimpawu ezicindezelayo. Kungaba nzima ukubona ukuthi ukusebenzisa izidakamizwa ze-porn nezidlayo kungaba kanjani nomphumela ofanayo ebuchosheni, kodwa kuyenzeka. Ingqondo iphendula ekukhuthazeni, kumakhemikhali noma ngenye indlela. Imiphumela ayimeli ku-hangover noma kunjalo. Ukuchayeka ngokweqile kulokhu okuqukethwe kungakhiqiza izinguquko zobuchopho ngemiphumela engahlanganisa okulandelayo:
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukudla izithombe zobulili ezingcolile kuhlobene ne ukungabi nokuzibophezela kumlingani wakho womlingani. Ukujwayela inoveli engapheli namazinga akhulayo okuvusa okuhlinzekwa yi-porn kanye nomcabango wokuthi kungahle kube khona umuntu 'oshisayo' kuvidiyo elandelayo, kusho ukuthi ubuchopho babo abusavuswa ngabalingani bokuphila kwangempela. Kungamisa abantu abafuna ukutshala imali ekwakheni ubudlelwane bempilo yangempela. Lokhu kuchaza usizi cishe kuwo wonke umuntu: amadoda ngoba awazuzi emfudumalweni nasekusebenzisaneni ubuhlobo bangempela bempilo obulethayo; nabesifazane, ngoba alikho inani lokuthuthukiswa kwezimonyo elingagcina indoda inentshisekelo ebuchosheni bayo obulungiselelwe ukuthi budinga amazinga amasha okuvuselela nokungajwayelekile. Kuyisimo sokunganqobi.
Abelaphi nabo babona ukwanda okukhulu kwabantu abafuna usizo lokulutha lwezinhlelo zokusebenza zokuthandana. Isithembiso esingelona iqiniso sokuhlala okuthile okungcono ngokuchofoza okulandelayo noma ukuswayipha, simisa abantu ukugxila ekwazini umuntu oyedwa nje.
Ocwaningweni lwabesilisa abaneminyaka yobudala eyunivesithi, ubunzima bokusebenza komphakathi kwanda njengoba ukusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile kwavela. Lokhu kusetshenziswe ezinkingeni zengqondo ezifana nokucindezeleka, ukukhathazeka, ukucindezeleka nokunciphisa ukusebenza komphakathi.
• Ukutadisha amadoda aseKorea afundisiwe kuma-20 awo atholakele ukukhetha ukusebenzisa izithombe zobulili ezingcolile ukuze uzuze futhi ugcine ukuthokozela kwezocansi. Bakuthole kuthakazelisa ukwedlula ukulala nomuntu ophethe naye.
Ukusetshenziswa kobulili ezingcolile kwaboniswa kuye ukunciphisa ikhono lomuntu lokubambezela ukuzithokozisa ngemiphumela eyigugu eyengeziwe yesikhathi esizayo. Ngamanye amagama, ukubukela i-porn kwenza ube nengqondo encane futhi ungakwazi ukuthatha izinqumo ezikucacisayo inhloso yakho njengokuthi wenze umsebenzi wesikole nokufunda kuqala kunokuba uzijabulise nje. Ukubeka umvuzo ngaphambi komzamo.
• Esifundweni sabafana abaneminyaka engu-14 ubudala, amazinga aphakeme ekusetshenzisweni kwezithombe zobulili ezingcolile e-internet aholela ku-a ingozi yokunciphisa ukusebenza kwezemfundo, nemiphumela ibonakala izinyanga eziyisithupha kamuva.
Umuntu obuka izithombe ezingcolile…
Uma umuntu ebuka kakhulu ezocansi, maningi amathuba okuthi azisebenzise lapho enza ucansi. Kungamnika isifiso sokwenza izikripthi ze-porn nomlingani wakhe, ngokuzibophezela ngamabomu izithombe zezithombe ezingcolile ngesikhathi socansi ukuze zihlale zivusa. Lokhu kuholela ekukhathazeni ngokusebenza kwakhe ngokocansi nesithombe somzimba. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwezithombe ezingcolile zobulili ezingcolile kuhlotshaniswa kabi nokujabulela ukuziphatha okubi kobulili nomlingani wakho.
Isifiso Sobucansi Esiphansi
Kokunye ukuhlola, abafundi ekupheleni kwesikole esiphakeme babike ukuxhumana okuqinile phakathi kwamazinga aphezulu okusebenzisa kabi izithombe zobulili ezingcolile kanye isifiso sobulili esincane. Ingxenye yesine yabathengi abavamile kuleli qembu libike impendulo engavamile yobulili.
• Isifundo se-2008 sobulili ku France bathole ukuthi i-20% yamadoda i-18-24 "ayikho inzalo kwezocansi noma emsebenzini wobulili". Lokhu kuphikisana kakhulu nesimo sezwe saseFrance.
• EJapan ku-2010: uhulumeni osemthethweni Ucwaningo bathole ukuthi abantu abangu-36% abaneminyaka engu-16-19 "abanasithakazelo kwezocansi noma banesiphetho". Bakhetha ama doll noma ama-anime.
Ukuthanda izinto zokuya ocansini…
Kwabanye abantu, kungenakulindelekile ukuthanda izinto zocansi okungahambi kahle ezibuyela emuva lapho ziyeka ukusebenzisa i-porn. Lapha udaba luqonde abantu ababukele i-gay porn, izitabane zibuka ama-porn aqondile kanye nokungafani okuningi. Abanye abantu futhi bathuthukisa izithasiselo nezintshisekelo zezinto zocansi kude nokuthanda kwabo ngokobulili okungokwemvelo. Akunandaba ukuthi ukuma kwethu noma ubunikazi bethu bocansi kuyini, ukusetshenziswa ngokweqile kwezingcolile ze-inthanethi kungadala ushintsho olukhulu ebuchosheni. Ishintsha kokubili ukwakheka kobuchopho nokusebenza. Njengoba wonke umuntu ehlukile, akulula ukusho ukuthi malini ama-porn anele enjabulweni ngaphambi kokuqala ukwenza izinguquko. Ukushintsha ukunambitheka kwezocansi kuyinkomba, kepha, yezinguquko zobuchopho. Ingqondo yawo wonke umuntu izosabela ngendlela ehlukile.
Bheka indawo yethu Ukuyeka Ukuzijabulisa ngosizo oluningi nokusikisela.
<< Ukulinganisela nokungalingani Imiphumela Yomzimba >>